Raiisal wasaaraha oo sharaxay waxa fashiliyay kulan uu la qaatay musharixiinta Hawiye - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waxa xalay aroor hore burburey kulan u dhexeeyay raiisal wasaaraha iyo musharixiinta Hawiye oo iyagu sheegta midowga musharixiinta. Kulanka oo dadka badankiisu u arkayaan mid u dhexeeya raiisal wasaaraha iyo jufadiisa ayaa burburey kadib markii ay dalbadeen in madaxda qaranka meesha laga saaro oo Hawiye keliya wada hadlo.
Raiisal wasaaraha ayaa hore uga ogolaaday inay berito ku dibiro dhacsadaan masaakiin shaqaysan lahaa oo ganacsigooda ka istaagi doono. ”Waxay qaateen taladii Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah inay xaafadaha ka soo bilaabaan banaanbaxa kadibna isugu yimaadaan Daljirka kadibna ku dibiro dhacsadaan ayuu yiri Cali Calasow.
”Waxay rabeen inay nidaamka doorasho ee dhamaaday ee la sugayo saxiixa aan dib u soo bilowno ayna daaqada ka soo galaan taasina uma arko mid saxa waayo maaha go’aan aan ani keli leeyahay ayuu yiri raiisal wasaaraha.
”Runtii cadaalad maaha waayo iyagu ma matalaan musharixiinta oo dhan ee waa qayb ka mida ayuu raaciyay Cali Calasow waxase ujeedadu tahay inay fuliyaan sida ajaanibtu rabto oo ah in la qalqal geliyo nidaamka doorasho waxa dhana la hoos geeyo gaalada XALANE.